छारे रोगका बारेमा जान्नैपर्ने कुराहरु - IAUA
छारे रोगका बारेमा जान्नैपर्ने कुराहरु
ramkrishna October 22, 2017	छारे रोगका बारेमा जान्नैपर्ने कुराहरु
तपाईं हाम्रो वरिपरि वा हामीमध्ये कसैलाई छारे रोग हुनसक्छ । गाउँघरमा कतिपयले यसप्रकारको रोगलाई ‘छोपुवा व्यथा’ पनि भन्छन् । यसलाई निको गर्न झारफुक गर्ने प्रचलन पनि नभएको होइन । तर, छारे रोग नशा सम्बन्धी समस्या हो । यसका बारेमा सबैले जानीराख्नु उचित हुन्छ ।Stabile Seitenlage
छारे रोग भनेको के हो?
दिमागका रहेका नसाहरुमा तरंगको प्रवाह चाहिने भन्दा बढी हुँदा त्यसबाट शरीरमा उत्पन्न हुने असामान्य अवस्थालाई छारे रोग भनिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा “इपिलेप्सी” भनिन्छ । यो रोग विभिन्न कारणले गर्दा हुन सक्छ जसमा मस्तिस्कमा हुने ट्युमर, इन्फेक्सन, चोटपटक, मेनिनाजाइटिस, विभिन्न औसधी र विषालु पदार्थको नकारात्मक प्रभाव, जन्मजात हुने समस्या आदि प्रमुख कारणहरु हुन् ।
यो रोगका लक्षणहरु के के हुन्?
छारे रोगमा निम्न लक्षणहरु देखिन सक्छ ।
*हात, खुट्टा र शरीर अनियन्त्रित रुपले काप्ने
*केहि समयको लागि अचेत हुने र एकछिनमा होस खुल्ने
*स-साना वच्चाहरुमा झस्किने, एक्कासी टोलाउने आदि
यस्ता समस्याहरु देखिएमा तुरुन्त नजिकैको अस्पतालमा चिकित्सकसंग छारे रोग नै हो या हैन जानकारी लिनुपर्दछ । यदि छारे रोग भएमा विभिन्न तरिकाबाट यसको उपचारको निम्ती आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
छारे रोगले विरामी मुर्छा परेमा तुरुन्त के गर्ने?
तपाइकोआफन्त, साथीभाई वा जोसुकैमा पनि यो समस्या भएमा दोश्रोपल्ट पनि दोहोरिने संभावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामी सबैले यसको प्राथमिक उपचारको वारेमा जारीराख्नु जरुरी छ । यदि कोहि मानिस छारे रोगबाट मुर्छा परिरहेको देख्नुभएमा निम्न प्राथमिक उपचारका विधीहरु पालना गर्नुपर्छ ।
*विरामीलाई आगो, फलाम, लगायतका अन्य खतरापूर्ण वस्तुबाट जोगाउने
*विरामीले सास फेरिरहेको छ वा छैन पत्ता लगाउने तर मुखमा कुनै वस्तु नछिराउने किनकी विरामीले जिव्रो टोकेमा त्यो मुर्छा पर्ने क्रमको सुरुमै हुन्छ र टोकिनबाट बचाउन सकिन्न
*विरामीलाई वायाँपट्टि कोल्टे फेरेर सुताउने
*यदि ५ मिनटसम्म पनि मुर्छा पर्ने क्रम रोकिएन भने तुरुन्त अस्पताल लैजाने वा चिकित्सकको सहयोग खोज्ने
*विरामीलाई पूर्ण रुपमा होसमा नआएसम्म एक्लै नछोड्ने
यसको निम्ति विशेषज्ञको निगरानीमा औषधि सेवन गर्न जरुरी हुन्छ । औषधि चिकित्सकको सल्लाह विना छोड्नु हुदैन र नियमित ठिक समयमा सेवन गर्नुपर्छ । लामो समयको वा औषधिले ठिक नहुने छारे रोगलाई केहि शल्यक्रियाको विधीबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ तर हाम्रो देशमा त्यो विधी त्यति विकसित रुपले आइसकेको छैन ।
ग्रामिण भेगमा यो रोगलाई लुकाउने, जुत्ता मोजा सुंघाउने, धामीझाक्रीलाई देखाउने जस्ता अन्धविस्वास रहेको पाइन्छ । औषधी सेवननै यसको उपचारको एकमात्र विकल्प हो ।
छारे रोगको विरामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु:
यो रोगको निम्ती कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म नियमित औषधि सेवन जरुरी पर्छ । यस रोगले मानसिक रुपमा र दैनिक जीवनयापनमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले विरामीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि आवश्यक पर्न सक्छ । औषधी सेवन गरिरहेको समयमा पनि मुर्छा पर्ने र वेहोस हुने समस्या जुनसुकै वेलामा देखिन सक्ने भएकाले खतरापूर्ण ठाउहरु जस्तै नदी, आगो, भिरालो पहाड आदिमा अर्को साथीसंग जानु ठिक हुन्छ ।
साथै उक्त समस्या भएका विरामीहरुले साइकल, गाडी जस्ता सवारीसाधन पनि सकेसम्म नचलाउन सुझाव दिइन्छ । ४-५ वर्षको अन्तरालमा मुर्छा पर्ने लगायतका लक्षणहरु नदेखिएमा फेरि दोहोरिने संभावना कम हुन्छ र त्यसपछि भने विरामीले सामान्य जीवन यापन गर्न सक्छन ।
छारे रोगको औषधि सेवन गरिरहेका महिलाहरुले गर्भवती भएमा तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिन जरुरी हुन्छ । किनकी यसको औषधीले वच्चाहरुमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने संभावना हुन्छ । साथै छारे रोगमा प्रयोग हुने केहि औषधिहरुले गर्भवती हुन रोक्ने चक्कीको पनि असर कम गरिदिन्छ ।
त्यसैले यसको वारेमा पनि चिकित्सकको राय सुझाव लिन वुद्धीमानी हुन्छ । समाज र परिवारको राम्रो साथ, सहयोग र नियमित औषधिको सेवन गरेमा छारे रोग निको हुन्छ ।
अन्धविश्वास र कुरीतिहरु भन्दा पनि चिकित्सक र अस्पतालको निगरानीमा स्वास्थ्य उपचार गरे छारे रोगको विरामीले पनि अन्य सामान्य मानिसले जस्तै जीवनयापन गर्न सक्छन । ओएस नेपाल
Previous Previous post: बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’
Next Next post: सावधान !! तीन घन्टाभन्दा बढी टीभी हेर्ने बालबालिकालाई मधुमेहको सम्भावना